Kumwe kusanzwisisana nezve MBR Maitiro ②-Maindasitiri nhau-Shenzhen SH-MBR Technology Co., Ltd.
Time: 2020-07-10 Hits: 108
Kunzwisisa zvisiri izvo 2: Kamwe MBR yashandiswa, hunhu hwemhando yepamusoro hunogona kuvimbiswa.
Kududzira kwakakodzera: Maitiro eMBR ari musanganiswa weyakagadziridzwa nzira yekudyara uye membrane filtration. Iyo yakavakirwa pane yechinyakare yakamisikidzwa sludge nzira uye inotsiva yechipiri yekugadzirisa tangi ine membrane kusefa.
Kuburikidza neiyi tekinoroji, inogona kuunza iwo mabhenefiti eakanaka ekupatsirana maitiro uye yakakwirira sludge concentration. Asi izvi hazvireve kuti kana MBR yangoitwa, mvura yese yemvura inogona kurapwa.
Nezve kubviswa kwezvinosvibisa, membrane kusefa ine yakajeka kwazvo mhedzisiro paSS, nepo kubviswa kwe organic chinhu kuchiri kutsamira pane iyo biodegradability yeyakagadziriswa sludge uye organic chinhu.
Kune tsvina ine hurombo biodegradability, MBR tekinoroji ine mashoma maitiro. Kune mvura yakasviba iyo yakanyatso gadziriswa kumucheto kwekumberi, basa reMBR tekinoroji rinogumawo.
Prev: Kumwe Kusanzwisisana nezve MBR Maitiro ③
Zvadaro: Zvimwe zvinonzwisisika nezveMBR Maitiro